SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bislama Bulgarian Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
PEDYO neRwizi rwaMotoyasu kuguta reHiroshima, kuJapan, pane chivako changova dongo kubvira muna 1945. Sezvo chava kutosvitsa makore 70 chakadaro, nei chisina kugadziriswa?
Chivako ichi chine nhurikidzwa nhatu chakapera kuvakwa muna 1915 uye chaishandiswa seimba yokuratidzira zvinhu kuitira kusimudzira zvokutengeserana. Asi zvinhu zvakachinja musi wa6 August 1945, nenguva dza8:15 mangwanani. Sezvo yakanga iri nguva yehondo, pane bhomba guru rakaputitswa mudenga mamita anenge 550 pamusoro peguta iri richibva raparadza chivako ichi. Munhu wose aivamo akabva angofiramo. Asi madziro echivako chacho akasara akamira.
Chivako ichi chakachengetedzwa chakadaro kuitira kuti chive “mucherechedzo wokuparadza kwakaipisisa kwakaitwa nevanhu,” inodaro nyaya yeUNESCO. * Muna 1996 chivako chacho chakabva chapiwa zita rokuti Hiroshima Peace Memorial chichibva chawedzerwa panzvimbo dzinocherechedzwa pasi rose dzinonyorwa paUNESCO World Heritage List.
Kunyange zvazvo nzvimbo dzinoyeuchidza vanhu nezvekuipa kwakaita hondo dzichiramba dziripo, hazvisi kuita kuti hondo idzo dzinowanzokonzerwa nemakaro, zvitendero uye kuvengana kwemadzinza nezvimwewo dzipere. Saka zvinoreva kuti hondo hadzifi dzakapera here?
Bhaibheri rinoti aiwa! Pisarema 46:9 inoti, ‘Mwari achagumisa hondo kusvikira kumugumo wenyika. Achatyora uta uye achagura-gura pfumo; achapisa ngoro nomoto.’ Panguva iyoyo, Mwari achatsiva utongi hwevanhu nehurumende yake ichatonga pasi rose. Hurumende iyoyo inotungamirirwa naJesu Kristu, uyo akasarudzwa kuti ave “Mambo wemadzimambo.”—Zvakazarurwa 11:15; 19:16.
Panenge pasisina chikonzero chokuramba tiine zvivako zvinotiyeuchidza nezvehondo. Isaya 65:17 inoti: “Zvinhu zvekare” kureva zvinhu zviri kuitika zvinorwadza uye zvinoodza mwoyo, “hazvizoyeukwi, uyewo hazvizouyi mumwoyo.”
^ ndima 4 United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization.